Qofkii ugu horreeyay oo coronavirus ugu dhintay meel ka baxsan Shiinaha |
Nin ayaa waxa uu caabuqa coronavirus ugu dhintay gudaha waddanka Philippines, kiiskaas oo noqonaya midkii ugu horreeyay ee la xaqiijiyo ee ka dhaca meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
Bukaanka oo 44 jir Shiinees ah ahaa ayaa waxa uu ka tagay magaalada Wuhan, ee gobolka Hubei, ee caabuqan uu ka soo bilowday.
In ka badan 300 oo qof ayaa caabuqaasi u dhimatay tan iyo markii uu dilaacay, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Hubei, halka in ka badan 14,000 qof uu haatan caabuqu haleelay.
Mareykanka, Australia iyo dalal kale oo badan ayaa waxa ay dalkooda ka hor istaageen inay galaan ajaanibta ka imanaysa Shiinaha, sidoo kale waxa ay karantiileen muwaadiniintooda markii ay dalkaas ka soo laabtaan.
Kiisaska coronavirus ee lagu arkay dunida ayaa waxa ay ka badatay kiisaska cudurkii noocaas oo kale ahaa ee Sars, kaas oo ku faafay in ka badan 20 dal sanadkii 2003. Hasayeeshee heerka dhimashada caabuqan cusub ayaa aad uga hoosaysa midkaas hore, oo taasi waxa ay tilmaamaysaa in sida kii hore uusan wax u dilin.
Dhanka kale xukuumadda Beijing ayaa mar kale kordhisay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha si ay uga hortagto in dadka shaqooyinka ku laabanaya ay faafiyaan cudurkaan halista ah ee neef mareenka ku dhaca.
Maraykanka iyo Australia ayaa sheegay inay dalalkooda u diiddi doonaan dhammaan ajaanibta dhawaan booqday Shiinaha halkaasi oo bishii December uu ka soo shaac baxay xanuunka Corona.
Waxaa ka sii horreeyay oo go’aan noocaas ah qaatay dalalka Ruushka, Japan, Pakistan iyo Talyaaniga.
Haseyeeshee mas’uuliyiinta hay’adaha caafimaadka adduunka ayaa diiddan xannibaadaasi.
Image captionDadka ku nool magaalada Manila ayaa durbadiiba saf u galay inay iibsadaan walxaha afka lagu duubto kaddib markii kiiska la xaqiijiyay